သေးငယ်သောလက်စွပ်သေးသေးလေးကိုအအေးကြိတ်စက်ကိုတရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ - ဗစ်တိုးရီးယားကြိတ်ခွဲစက်မှရောင်းချသည်
စွမ်းရည်:3000-4000ကီလိုဂရမ် / နာရီ
Ring Die Pellet Mill ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်သောအတောင့်တောင့်များနှင့်အလုံးကြီးများထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်. အခွံသေတောင့်စက်သည်ကျယ်ပြန့်သောဆလင်ဒါပုံစံရှိပြီးသေဆုံးသည်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်သည်. ၎င်း၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြောင့်, ဒါကြောင့်အပြားသေတောင့်ကြိတ်ကဲ့သို့အဖြစ်များသောမဟုတ်ပါဘူး. အသေးစားလက်စွပ်အတောင့်ကြိတ်စက်သည်အများအားဖြင့်လုံးလေးများစီးပွားရေးနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။, ဆိတ်ကွယ်ရာအရည်အသွေးမြင့်လက်စွပ်ကနေတောင့်စက်များသေဆုံးလျက်ရှိသည်, ကျွန်ုပ်တို့မှထုတ်လုပ်သောလက်စွပ်သေတ္တာများနှင့် roller များကိုပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လက်စွပ်သေတ္တာလုံးနှင့်အထူးကိုက်ညီသည်. ထို့ကြောင့်, သင့်လျော်သောသေဆုံးမည့်ပုံကိုသင်စိုးရိမ်ရန်မလိုအပ်ပါ, roller နှင့်အခြားဝတ်ထားအစိတ်အပိုင်းများ.
၎င်းကို Ring Die pellet စက်ဟုခေါ်သည်?
အကြောင်းပြချက်မှာဤသေးငယ်သောလက်စွပ်သည်အတောင့်ကြိတ်စက်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းမှာလည်ပတ်စက်ဖြစ်သည်, အဲဒါကို "သေ" လို့ခေါ်တယ်. ပြီးတော့ရှိပါတယ်2အသေပေါက်များနှင့်ဆလင်ဒါပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအပေါက်များကို ဖြတ်၍ အလယ်ရှိဇီဝလောင်စာကိုလှည့်ထုတ်။ ထုတ်လွှတ်ရန်လက်စွပ်အတွင်းရှိ roller များကိုပြုလုပ်သည်.
သစ်သားလက်စွပ် Die Pellet စက်အင်္ဂါရပ်များ
1. Main drive သည်မြင့်မားသောတိကျမှန်ကန်သောဂီယာ drive ကိုအသုံးပြုသည်, အကြောင်းကိုတစ်ခု output ကိုအတူ 20% ခါးပတ် drive ကိုထက်ပိုမိုမြင့်မား, နှင့်သေအလျင်အမြန်ဖယ်ရှားရေးညှပ်ချမှတ်.
2. မော်တာအပါအ ၀ င်စက်၏မောင်းနှင်မှုအပိုင်းသည်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သောအရည်အသွေးမြင့် SKF အညစ်အကြေးများကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေသည်, အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူမြင့်မားသောအကျိုးရှိစွာနှင့်တည်ငြိမ်မောင်းနှင်မှုသေချာ.
3. အဆိုပါအလွန်အရေးကြီးသည်လမ်းခွဲ device ကိုမွေးစားသည်, သစ်သား sawdust ကဲ့သို့ပစ္စည်းအဖြစ်စက်ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်အောင်သော, ပြောင်းဖူး, ဂျုံ, နှင့်ဆန်ကောက်ရိုးအလွန်ပေါ့ပါးသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကအင်အားဖြင့် pelletizing အခန်းထဲသို့တွန်းခံရဖို့လိုအပ်နေပါသည်.
4. အပြည့်အဝသံမဏိအားဖြည့်အစာကျွေးခြင်းအေးစက်, အရည်အသွေးမြင့်သစ်သားလုံးလေးများကိုအာမခံရန်ထိန်းချုပ်မှုကိုထိန်းညှိသောကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းမြန်နှုန်းကိုလက်ခံသည်.
5. သံမဏိသေတ္တာများကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်ဂျာမန်သေနတ်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အမေရိကန်ဖုန်စုပ်စက်များဖြင့်ပြုလုပ်သည်, တာရှည်ခံသက်တမ်းရှိပြီးချောချောမွေ့မွေ့ကောင်းမွန်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသည်.
6. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်လျော်ကြေးပေးခြင်းအမျိုးအစားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သောအဆက်အစပ်သည်အသစ်နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, နိမ့်ဆူညံသံနှင့်လျော့နည်းဒုက္ခ.
လက်စွပ် Die Pellet စက်အပိုပစ္စည်းများ( roller, သေသွားတယ်, roller ခွံ)
Ring Die Wood Wood Pellet Machine မှမည်သည့်ပစ္စည်းများလုံး ၀ ထိုးနိုင်သည်?
သစ်တောနှင့်စိုက်ပျိုးရေးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းအားလုံးနီးပါးကိုကျွန်ုပ်တို့၏လက်စွပ်ဖြင့်သေသောသစ်သားလုံးလေးများဖြင့်သစ်သားလုံးလေးများထဲသို့လုပ်နိုင်သည်, ကဲ့သို့: သစ်သားထည်, shaving, Sawdust, မြေပဲခွံ, ကြံကြံဇီဝဓာတ်ငွေ့, Caster Shells / အညှာ, ကော်ဖီခွံ, စပါးကျင်း, နေကြာညှာ, လဲမှို့, ဆေးရွက်ကြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း, မုန်ညင်းစေ့, ရေဆိုးစွန့်ပစ်ပစ္စည်း, ဝါးဖုန်, လက်ဖက်ရည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်း, ဂျုံမှုန့်, Palm သတိရပါ, ပဲပုပ်ကိုသတိရပါ, Coir အသံ Barks / Straw, စပါးခွံများစသည်တို့ဖြစ်သည်. နောက်ဆုံးအတောင့်များကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးဘွိုင်လာများနှင့်ကြီးမားသောဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအပြင်အိမ်အပူပေးရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်.
Ring Die Pellet Mill ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
1~ ၁.၅ 1.5~ ၂.၅ 2~43~66~ 10 10~ 15
.51.5, Φ2, .52.5, Φ3, .53.5, Φ4, .54.5, Φ5, Φ6, Φ8စသည်
ကြက်သား ,ဘဲ,ယုန် ,ဘဲငန်း,တိရစ္ဆာန်များ ,သိုးစသည်တို့